प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्ष– ‘एमाले फुटाउन नपाएको भए देश के हुन्थ्यो ? बिलाउथ्यो ?’ « Image Khabar
प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्ष– ‘एमाले फुटाउन नपाएको भए देश के हुन्थ्यो ? बिलाउथ्यो ?’
Imagekhabar ९ भाद्र २०७८, बुधबार १५:३७
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘देश जोगाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको’ भन्ने सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले देश जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भनेर अध्यक्ष दाहालले विल्कलै झूट बोलेको दावी गर्दै देशका अगाडि बेइमानपूर्ण कुरा नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
बुधबार मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले पहिला आफूले जारी गरेको अध्यादेश र अहिले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको उद्देश्य र मनसायनै फरक रहेको दावीसमेत गर्नुभयो । ‘एमाले फुटाउनका लागि ल्याएको अध्यादेशलाई देश जोगाउनका लागि भन्ने ?’, अध्यक्ष ओलीको प्रश्न थियो ।
सरकारले बदनियतका पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएर अनुचित कार्य गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । सरकार अनैतिक काममा लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले देश जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्नेहरुलाई अध्यादेश नआएको भए देश के हुन्थ्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एमाले फुटाउन नपाएको भए देश के हुन्थ्यो ? बिलाउथ्यो ? यो के घाममा राखेको बरफको डल्लो हो ? कर्कलाको पातमा राखिएको पानी हो यो देश खर्तक्क झर्ने, कहाँ खस्यो–खस्यो थाहा नपाउने ? देश जोगाउनका लागि अध्यादेश भन्ने कुराको पनि हद हुन्छ नि !’
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले कामै नगर्ने दावीसमेत गर्नुभयो । आफू नेतृत्वको सरकारलाई कामै गर्न नदिएको जिकिर गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार आफैँले विकास निर्माणको काम ठप्प पारेको आरोप लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले दीर्घकालीन खालका आयोजनाहरूको काम अघि नबढाउन सरकारले परिपत्र गरेको उल्लेख गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानीको आयोजना आगामी वैशाख भित्र काठमाडौं ल्याउने कुरा गरे पनि सरकारले सोही अनुसारको काम अघि बढाउन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसहितका पार्टीले निश्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना जारी नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको चर्को आलोचना गर्नुभयो । उहाँले पार्टीले निश्कासन गरेका आफ्ना सांसदहरूको मुद्दा विचाराधिन छ भनेर सभामुख सापकोटाले राजनीतिलाई गिजोल्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
सभामुख सापकोटाले पक्षधरताको राजनीतिमा हात हाल्ने काम गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ । उहाँले सभामुख सापकोटाका पछिल्ला गतिविधि खेदजनक रहेको औंल्याउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज बनाउनका लागि सरकारले कानुन बनाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्रका लागि लडेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा व्यक्तिका लागि कानुन बनाउने जस्तो काम गरेकोमा आफू आश्चर्य चकित भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले देश र जनताका लागि आवश्यक पर्दा मात्रै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि वर्तमान सरकारले त्यस विपरित काम गरेको पटक–पटक दोहोर्‍याउनुभयो ।